Fifanakalozana ara-barotra amin'ny varotra hafa | Martech Zone
Fandraharahana ara-barotra amin'ny varotra hafa
Talata, Martsa 19, 2013 Talata, Septambra 17, 2013 Douglas Karr
Iray amin'ireo fotoana mety ho an'ny mpivarotra Business to Business (B2B) dia ny misambotra ny fifamoivoizana ho an'ireo olona mitady fomba hafa. Mikaroka fividianana rindranasa ny olona na tsy faly izy ireo ary maniry ny handao mpivarotra iray - mampiasa teny toa alternative to, na mitovy amin'ny, na fampiharana toa hilazana ny fikarohana ataon'izy ireo.
Ity misy ohatra tsara iray - fitadiavana safidy hafa amin'ny Wufoo:
Formstack dia nanararaotra io fotoana fikarohana io tamin'ny alàlan'ny fananganana an pejy miavaka izay mamaritra ny tombony azo avy amin'ny lohan'ny loha amin'ny fampiasanaformstack any Wufoo. Ary, mazava ho azy, satria misy ifandraisany ny pejy dia avo lenta ho azy ireo izy ireo. Ampirisihiko ny mpivarotra hamoaka pejy anatiny izay mampitaha sy mampifanohitra ny fampiharana azy ireo amin'ny fifaninanany. Rariny fotsiny sao dia atolotra anao ny vodin'ialahy! 🙂
Ankoatr'izay, misy lahatahiry vitsivitsy vitsivitsy any mba hahazoana antoka fa voatanisa ianao:
alternateTo - lahatahiry lehibe rindrambaiko hafa izay manana laharana miavaka amin'ny motera fikarohana (na dia hitako aza tsy marina ny filaharana sy ny valiny matetika).
Serchen - motera fikarohana mikaroka rindranasa rahona… misy ny hevitra.
GetApp - tranokala famerenana lozisialy momba ny fikarohana rindranasa.
moreofit - tranonkala lahatahiry mahita tranonkala mitovy amin'izany. Ity koa dia misy rahona sy lozisialy ho fampiharana fampiharana.
FikarohanaSiteSite - tranokala lahatahiry hafa izay mahita tranonkala mitovitovy. Ity koa dia misy rahona sy lozisialy ho fampiharana fampiharana.
Aza hadino ny manararaotra ireo fikarohana ireo rehefa mampiroborobo ny orinasanao vaovao ianao. Manangana pejy anatiny be fanatsarana izay mampiroborobo ny rindranasao amin'ireo mpifaninana aminao. Hanangana pejy iray ho an'ireo mpifaninana ambony indrindra aho. Ho fanampin'izany, aza hadino ny mametraka ny rindranasao voatanisa ao amin'ireo motera fikarohana sy lisitra hafa etsy ambony. Mahazo lahatahiry hafa hatoro anao? Ampio izy ireo ao anaty hevitra!
Tags: rindrambaiko hafaalternative tomotera fikarohanafampiharana fikarohanab2bb2b safidymitovy amin'ny
Google Co-nitranga: efa maranitra noho ny noeritreretinao
Fandraisana andraikitra ara-tsosialy